Maxaabiis Soomaali oo ka baxsatay xabsi ku yaala Tribuli – Radio Daljir
Maxaabiis Soomaali oo ka baxsatay xabsi ku yaala Tribuli
Agoosto 28, 2018 6:56 b 0
Dagaal u dhaxeeya kooxo hubeysan oo Liibiyaan ah ayaa ka dhacaya magaalada Tripoli ee caasimada dalka Libya, kaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawac soo gaadhay dhinacyada dagaalamaya.
Meelaha lagu dagaalamayo, waxaa kamid ah xabsiyo ay ku xidhnaayeen Soomaali tahriib ahaan ku gadhray magaalada Tripoli, kuwaasi oo qaarkood la sheegay inay ka baxsadeen xabsiga kadib markii ay ka baqeen inay rasaasta saameyso.
Xabsiyo badan oo ay ku xidhnaayeen Soomaali tahriib ah ayaa albaabada loo balaqay, sida uu xaqiijiyay Safiirka dowladda Soomaaliya u qaabilsan Midowga Yurub Danjire Ali Saciid Faqi.
“Waxaa dhamaan waalidiinta dhalinyarada ku xidhan xabsiyada Libya la ogeysiinayaa in dagaal culus uu ka dhacay magaalada Tripoli, dhawr xabsi oo Soomalida ku sugneed ayaa irida loo balaqey, waxay safaarada ka shaqeynaysaa in dhalinyarada meel la isugu keeno”. Ayuu yidhi Danjire Cali Faqi.
Soomaali badan ayaa ku xidhan xabsiyada ku yaalla dalka Liibiya, intooda badan waxaa loo heystaa falal la xiriira burcad badeednimo, dowladda Soomaaliya ayaa dhawr mar dalka keentay maxaabiis, welina waxaa socda hawlo lagu soo daabulayo maxaabiista ku xiran dalka dibaddiisa.
Goob jooge “Inta badan Goobaha Ganacsiga waa ay xiran yihiin ciidamo beeleed hubeysan ayaan ku aragnaa Xaafadaha Bartamaha Magalada Baladweyne”